Dhulkii Loo Balan Qaaday: Suuqgeynta Faa'iidada Leh ee Joogtayna ROI Ayaa Soo Socota | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 20, 2015 Jimco, Oktoobar 23, 2015 Katie Karr
Ku soo dhowow waxa ay teknoolojiyadda suuqgeynta u yeerayaan Waayaha Khibradaha Macaamiisha.
Marka la gaaro 2016, 89% shirkaduhu waxay filayaan inay ku tartamaan iyada oo ku saleysan khibrada macaamiisha, marka loo eego 36% afar sano ka hor. Xigasho: Gartner
Maaddaama habdhaqanka macaamiisha iyo teknoolojiyada ay sii wadaan inay isbeddelaan, istiraatiijiyad suuqgeyntaada ah waxay u baahan tahay inay la jaan qaado safarka macaamiisha. Waxyaabaha guuleysta waxaa hadda lagu wadaa waaya-aragnimo - goorma, goobta iyo sida ay macaamiishu u doonayaan. Khibrad wanaagsan oo ku jirta kanaal kasta oo suuq geynaya ayaa ah furaha kaliya ee ugu muhiimsan ee isbeddelkan.
Widen waxay ku sahmisay dhacdadan sanadihii ugu dambeeyay, Hubaynta Suuqgeynta Mawduucaaga ee Dagaal Cusub: Khibrad Macaamiil. Waa aragti dhammaystiran oo ku saabsan sida suuq-geyntaada ay u saameyneyso khibrada macaamiisha, iyadoo la siinayo talooyin ku saabsan sida wanaagsan ee saamaynta ugu yeelan karto astaantaada.
Qaybaha khibrada macaamiisha ee guuleysta waxaa lagu soo koobi karaa seddex dareen:
Ogow macaamilka - Aqoonso macaamilka, taariikhdooda, iyo waxa uu doorbido.
La xiriir macaamilka - Taabo shucuurta, tus waxyaalaha ay daneynayaan, oo waqtiga ha ku lumin wax aan iyaga u ahayn.
Ha uga tagin macaamilka inuu daldalo - Sii jawaabo waqtiyaysan, oo khuseeya goorta iyo meesha ay macaamiishu rabaan.
Suuq geyn faa'iido leh oo waara ROI waa la gaari karaa. Raac tillaabooyinkan oo meheraddaadu mar dhow bay geli doontaa Dalkii Ballanqaadka.
Tags: Maareynta MaareyntaContent Suuqkhibrada macmiilkamaaraynta hantida dijitaalka ahinfographicfidin
Anigu waxaan ku takhasusay suxufiga IUPUI iyadoo diirada la saarayo Xiriirka Dadweynaha iyo in yar oo ku saabsan Maareynta Dhacdooyinka. Haatan waxaan helayaa dhadhaminta adduunka suuqgeynta oo ah layli waqti-buuxa ah DK New Media. Arday han weyn, gabar, walaashiis, saaxiib, iyo ey-hooyo.
3 Furayaasha Casriyaynta Khibradaha Dukaanka… iyo Dakhliga